Wuxuu Badbaadiyay Nolosha Dad Badan!
Mr. Maurice Ralph Hilleman wuxuu ahaa Biolojiste Maraykan ah oo ku takhasusay Talaalka (vaccinology) wuxuu horumar ku sameeyay in la helo in ka badan 40 tallaalada xanuuno dadka dhib badan ku hayay oo in badana noloshooda galaaftay.
Wuxuu ku dhashay sanadkii 1919-kii, Magaalada Miles City ee dalka Maraykanka , waxaana uu ku guulaystay inuu helo talaalo waxtar badan leh oo si joogto ah loo isticmaalo.
Talaalada uu soo saaray ee nolosha muhiimka u ahaa cuduro badan lagaga hortago waxa ka mida talaalka Jadeecada, Kan Joonisa A iyo Kan B, Xanuunka qoor gooyaha (meningitis),. Xanuunka caabuqa sambabada, ku dhaca.
Waxa kale Mr. Hilleman uu ka qayb qaatay helitaanka Viruska Kansarka ee loo yaqaan sv40 Mr.Maurica wuxuu ku guulaystay in la siiyo bilada Qaranka ee dhinaca sayniska ee dalka Maraykanka. Waxaana loo aqoonsaday inuu yahay aqoonyahan badbaadin badan ku sameeyay nolosha bulshooyinka Aadamiga heerkaasi oo aanu gaadhin aqoonyahan kale. Dhakhtarkani wuxuu ku dhintay dalkiisa Maraykanka sanadkii 2005.